जाडोमा हरियो सागसब्जी किन खानुपर्छ ? यसले केके फाइदा पुर्याउँछ ? || समाचार
जाडोमा हरियो सागसब्जी किन खानुपर्छ ? यसले केके फाइदा पुर्याउँछ ?
काठमाडौं ।जाडोमा हरियो सागसब्जी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसमा पाइने पोषक तत्वले शरीरलाई बलियो बनाउँछ । पातले तरकारीले जीवनशैलीसँग सम्बन्धित धेरै रोगलाई टाढा राख्न पनि भूमिका खेल्छ ।
अनुसन्धानका अनुसार हरियो सागपातमा अन्य तरकारीको तुलनामा दोब्बर पोषक तत्व पाइन्छ । एक औसत वयस्कले दैनिक साढे दुई कप हरियो सागपात खानुपर्छ। तिनीहरूको नियमित सेवनले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटोपना र मुटु रोगविरुद्ध लड्न मद्दत गर्दछ।
पालकमा पाइने आइरनले शरीरमा आइरनको कमीलाई पूरा गर्छ । यसमा क्याल्सियम र भिटामिन ए जस्ता पोषक तत्व पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।
यसमा पाइने बिटा क्यारोटिन, भिटामिन ए र सीले क्यान्सर कोशिकाको वृद्धिलाई रोक्छ र म्याकुलर डिजेनेरेशन भनिने आँखाको रोगको जोखिम कम गर्छ।
भिटामिन-के, फोलेट र ल्युटिन जस्ता पोषक तत्व मस्तिष्कका लागि राम्रो हुन्छ। यसमा पाइने पेप्सिन नामक इन्जाइम र नाइट्रेट तत्वले रक्तचाप र मुटुको रोगबाट बचाउँछ।
हरियो प्याजले पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुका साथै आँखाको ज्योति र छालाको चमक बढाउँछ ।
अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि हरियो प्याजमा रक्तचाप सामान्य बनाउन र रगत जम्नबाट रोक्नको लागि विशेष गुणहरू छन्। यसमा क्याल्सियम पनि प्रशस्त हुन्छ । चिसोका कारण हुने चिसोमा पनि यसले राहत दिन्छ ।
यसको एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणले दम र बाथ रोगहरूमा फाइदा पुर्‍याउँछ। यसको एन्टी-हाइपर-लिपिडेमिक गुणले कोलेस्ट्रोललाई ठीक गर्छ।
मेथीमा पाइने प्रोटिन, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फोलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, जिंक र कपर जस्ता पोषक तत्वले यसलाई स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक बनाउँछ।
जोर्नी तथा शरिर दुख्ने देखि मोटोपना सम्मको समस्यामा मेथी खानु फाइदाजनक हुन्छ । यसले मधुमेह, उच्च रक्तचाप र अपचजस्ता समस्यामा राहत दिन्छ।
बेथेको सागमा आइरन, फस्फोरस, भिटामिन-ए र डी बाहेक धेरै खनिज तत्वहरू पाइन्छ। जाडोमा यसको सेवनले कब्जियत, अपच, भोक नलाग्ने र अमिलो डकारबाट पनि राहत मिल्छ। यसले आन्द्रा र रगतलाई पनि सफा गर्छ । बेथेको रसले फोका र चिलाउनेमा आराम दिन्छ। यसको पात काँचो चपाउँदा सासको दुर्गन्धबाट आराम मिल्छ।
तोरीमा फाइबर, क्याल्सियम र प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसको नियमित सेवनले उच्च रक्तचापको जोखिम कम गर्छ र रगतसँग सम्बन्धित विकारहरू पनि हटाउँछ। फाइबर प्रचुर मात्रामा हुने भएकाले यसले मेटाबोलिजमलाई गति दिई तौललाई नियन्त्रणमा राख्छ ।
भिटामिनको कमीले हड्डीमा हुने कमजोरीलाई यसबाट हटाउन सकिन्छ । यसमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्ट क्यान्सरसँग लड्न प्रभावकारी हुन्छ ।
मूलाले भोक बढाउनुका साथै पाचन प्रणालीलाई पनि ठिक राख्छ । क्याल्सियम, आयोडिन, म्याग्नेसियम, फस्फोरस र प्रोटिन जस्ता पोषक तत्वहरू पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। मृगौला सम्बन्धी समस्या र पिसाबसम्बन्धी रोगमा मूली खानु उपयुक्त हुन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार निद्रा नलाग्ने, सधैँ थकान महसुस हुने, घाँटी दुख्ने, कब्जियत, दाँत पहेँलो हुने, सासको दुर्गन्ध जस्ता समस्यामा पनि मूलाको सेवन निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
सधैं ताजा तरकारी मात्र किनेर खानुहोस्। हरियो सागसब्जी पहिले धुनुहोस् र त्यसपछि काट्नुहोस्। जसले गर्दा पौष्टिक तत्वहरू धुँदा पानीमा खेर जाँदैन । सागलाई अत्यधिक खाना पकाउने र स्वाद बढाउन धेरै मसलाहरू नराख्नुहोस् ।